စကျတငျဘာ 6, 2018 – Healthy Life Journal
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၄) “ဆေးရပ်ချင်ပြီ”
ဒေါက်တာအုန်းကျော်(စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူ ကုသခဲ့တဲ့ လူနာတွေ၊ လူနာရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး သင်တန်းသားတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ သိချင်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး “ရှင်းပြပါ ဆရာ”ဆောင်းပါးစဉ်ကို ဆက်လက်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. AIDS ရောဂါရှိသူတွေမှာ ဘယ်အချိန်ဆိုရင် မျက်စိရောဂါပိုးတွေ ကျရောက်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. AIDS ရောဂါရှိသူတွေမှာ CD4 Count က ၅၀ အောက်ဆိုရင် မျက်စိထဲကို ရောဂါပိုးကျရောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းက များပါတယ်။ မေး. AIDS...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း၊ ဟယ်ရီစတိုင်စ်တို့လို နာမည်ကျော်တွေအပါအ၀င် လူအများစုက ခန္ဓာကိုယ်အလှအပအနေနဲ့ တက်တူးထိုးကြတာ ခေတ်စားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်သုတေသီတွေက မကြာခင်က တက်တူးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဆိုးကျိုးကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ တက်တူးထိုးထားတဲ့ အရေပြားက ပုံမှန်အရေပြားထက် ချွေးထွက်နည်းတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာ ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုနှစ်ဆနီးပါးများတာကို...
ဗီတာမင်အီးချို့တဲ့ပါက ဖြစ်တတ်သည့် လက္ခဏာများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဗီတာမင်အီးက အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ အမျိုးအ စားဖြစ်ပြီး အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဂုဏ်သတ္တိရှိတာ ကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့အလှအပအတွက် အများကြီး ကောင်းကျိုးရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးချို့တဲ့တဲ့အခါ အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ – အသားအရေခြောက်သွေ့အိုမင်းခြင်း ဗီတာမင်အီးချို့တဲ့ရင် အရေပြားဆဲလ်တွေ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ရာက အရေးကြောင်းထင်တာနဲ့...
မက်ဖော်မင် မနက်တစ်လုံး၊ ညနေတစ်လုံး (၁)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “မက်ဖော်မင် မနက်တစ်လုံး၊ ညနေတစ်လုံး အမြဲသောက်နေပါတယ်။” ဒါကတော့ နေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုလူနာတွေရဲ့ ဖြေကြားသံလေးတွေကို ပဲ့တင်ထပ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲကြားနေကျဖြစ်ပြီး လူနာအသစ်ရောက်လာတိုင်း ဒီလေသံမျိုးထပ်ကြားရဦးမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရနေပါတယ်။ ဒီလောက် ထပ်တူထပ်မျှတူညီနေတဲ့ “မက်ဖော်မင် မနက်တစ်လုံး၊ ညနေတစ်လုံး”...
မေး. Pancreas လဲလို့ရပါသလားဆရာ။ လဲလိုက်ရင်ကော ကောင်းသွားနိုင်ပါသလား။ လဲလို့ရရင် ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲ။ Nanda Oo (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. Pancreas transplant (မုန့်ချိုအိတ်အစားထိုးကုသမှု)ကို pancreas နဲ့ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေသူတွေမှာ ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ ကုသလိုက်ရင် ကောင်း၊...